Malunga nathi-Hengshui Hongzhu Medical Technology Co, Ltd.
Isixhobo sokuSebenza seNtambo yomqala
Isilumkiso seSmart smart
UMoya oSebenzayo weSitulo seHlabathi
Unyango lweMoya yoNyango
IHengshui Hongzhu Medical
Itekhnoloji Co, Ltd.
Sine-8 yabantu kwishishini lamazwe aphesheya, inkokheli ebiza ishishini inamava okurhweba aphesheya kwiminyaka eli-18, abantu aba-5 baphawula isiNgesi, umntu om-1 owenza iSpanish, umntu o-1 waseJamani.
Sonke sijolise kwinto enye, ukubonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu, ixabiso lokhuphiswano, kunye nenkonzo yobungcali.
Sisebenzela ukwenza iimveliso zokhathalelo lobuqu kule meko phantse iminyaka eli-10, iimveliso zethu kubandakanywa izixhobo zesibeleko somlomo wesibeleko, ukulungiswa kwesithuba, ukubuyela umva, amabhanti okuqeqesha esinqeni, izitulo ezihamba ngamavili, abakhweli bokubhukuqa, iitreyini, njl njl.
Siyakwamkela ngokufudumeleyo ukutyelela kwakho kwaye sijonge phambili ekusebenzeni nawe kungekudala.
Ileta enye kubo bonke abahlobo bethu-cebisa ...
Bahlobo abathandekayo, Ngoku kunanini na ngaphambili, ngeli xesha lesidingo, ukuxhasana kube yinto yethu. Sisonke siqhubela phambili ngomonde kunye nethemba ebusweni bokungaqiniseki. Njengoko sisebenza nzima ukukhusela i ...
Iimveliso ezintsha ukufika-ulungelelaniso
Molo, wonke umntu, zikho iindaba ezilungileyo zethu sobabini kunye nawe, siphuhlise isimbo esimalunga nesithathu sokulungiswa kwendawo yokulungisa. Imifanekiso yereferensi yakho njengoko, ...
Ungayikhetha njani i-hemiplegic Walker
Ngokwezibalo, rhoqo ngonyaka kukho abaguli abanesifo se-1,2-1,8 sezigidi, ama-400000-800000 ukusweleka konyaka kunye ne-86,5% yokukhubazeka. Ngokwezibalo zabaphengululi abathile, phakathi kwabaguli abasindileyo abanesifo sephepha, ...
Molo, wonke umntu, zikho iindaba ezilungileyo zethu sobabini kunye nawe, siphuhlise umyili omtsha wesitayile sokulungisa. Imifanekiso yereferensi yakho njengoko, ...
Ukubhiyozela-ukusebenzisana nomzi-mveliso waseRUKANG ...
Yibhiyozele ngokufudumeleyo intsebenziswano kwezonyango lwaseHongzhu naseRukang ukusayina izivumelwano kwizitulo ezihamba ngamavili. Izikhokelo ezivela kuwo omabini amaqela, uMnu Yang noMnu Lv baya kuyo kwaye bayathembisa ukuba baya kuzama konke okusemandleni ukuxhasa ...